जान्नुहोस् ! गाईको दूध खानु फाइदा की भैसीको ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:२१0
काठमाडौँ । दैनिक जीवनमा दूधको जति महत्व रहेको छ । दूधलाई भान्सादेखि लिएर विभिन्न प्रकारको परिकारहरु बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ । त्यतिमात्र हैन दूध बच्चाको लागि त झन धेरै उपयोगी मानिन्छ । हामीले दैनिक सेवन
काठमाडौँ । हरेक घरको भान्सामा पाइने लसुन हामीले खानामा केही न केहीको माध्यमबाट खाइरहेका हुन्छौँ । लसुनको प्रयोगले खानेकुराको स्वादलाई बढाउँछ । स्वास्थको लागि निकै फाइदाजनक रहेको लसुन काँचो भन्दा बढी भुटेको खानुमा धेरै फाइदा
मुटु रोग लागेको कसरी थाहा पाउने यसो भन्छन्, डा. ओममूर्ति अनिल
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:०३0
काठमाडौँ । अस्त व्यस्त जीवन शैली र खानपानको कारण मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगहरु बढ्न थालेको छन् । त्यसकै उपज हो मुटु रोग । परिवर्तनशिल खानपान र व्ययाम, योगा लगायतका कमीको कारण मानिसमा मुटु सम्बन्धी रोगहरु
५० भन्दा बढि रोग लाग्नबाट बच्न पिउँनुहोस्, यस्तो चिया (बनाउने विधीसहित)
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००८:५५0
नयाँ दिनको सुरुवात सबैजसो मानिसहरुले चियाबाट गर्ने गर्दछन् । अंधिकाशको भनाइ पनि रहेको छ कि बिहान मुखमा मिठो चिज परेमा पुरै दिन मिठो हुन्छ। यसमा केहि सत्यता भने अवश्य पनि लुकेको छ । बिहानको समयमा
जान्नुहोस् ! बर्ड फ्लु भएको बेला कुखुराको मासु खानु हुन्छ की हुँदैन् ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:१६0
काठमाडौँ । पछिल्लो समय बर्ड फ्लुको संक्रमण निकै बढेको छ । नेपालमा पहिलो पटक बर्ड फ्लुको कारण ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् । तर बर्ड फ्लु भएको बेला कुखुराको मासु खानेकी नखाने भन्ने कुरामा मानिसहरु धेरै
आयुर्वेदिक महत्वका यस्ता जडीबुटी, जसको उपयोग निकै लाभदायक हुन्छ
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:२५0
काठमाडौं, ५ पुस । तपाई हामी दिनहुँ किचेनमा प्रयोग गर्ने केही जडीबुटी जो आयुर्वेदिक महत्वका पनि हुन्छन् । ताजा या सुकेका यस्ता हरियो जडिबुटी अनेक औषधीय गुणले युक्त हुन्छन् । यस्ता जडीबुटीबारे जानकारी राख्न सकिए
के तपाई आफुलाई तनाव मुक्त गराउन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हाे भने यी खानेकुरा खानुहोस्
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:४९0
काठमाडौँ । पछिल्लो समय तनाव शब्द सामान्य जतिकै भएको छ । पढाइको कारण होस या करियरको कारण हुने असन्तुष्टिले मानिसमा तवान उत्पन्न हुन्छ । अन्तत त्यही तनावकै कारण मानिसहरु डिपेसनको सिकार बन्ने गरेका छन्